नेप्सेमा ४ कम्पनीको ३ करोड ९३ लाख कित्ता हकप्रद र बोनस सेयर सूचीकृत, कुनको कति ? – OnlinePahar
नेप्सेमा ४ कम्पनीको ३ करोड ९३ लाख कित्ता हकप्रद र बोनस सेयर सूचीकृत, कुनको कति ?
२८ माघ २०७७, बुधबार १६:१६ Basanta Khanal	0 Comments	Share listed
काठमाडौं : नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा आइतबार ३ करोड ९३ लाख ६१ हजार ५८७.७३ कित्ता सेयर सूचीकृत भएको छ । जसमा २ करोड ५७ लाख ५६ हजार ५५३.७३ कित्ता बोनस सेयर र १ करोड ३६ लाख ५ हजार ३४ कित्ता हकप्रद सेयर रहेको छ । सबैभन्दा धेरै नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको १ करोड ८८ लाख ८३ हजार ७५० कित्ता (१३%) बोनस सेयर रहेको छ ।
यस्तै, गरिमा विकास बैंकको ४३ लाख ७२ हजार २३०.७३ कित्ता (१३.५०%) र साना किसान विकास लघुवित्तको २५ लाख ५७३.५६ कित्ता (२५%) बोनस सेयर पनि सूचीकृत भएको छ । त्यस्तै, नागरिक लगानी कोषको १ करोड ३५ लाख ९२ हजार ५९२ कित्ता र साना किसान विकास लघुवित्तको १२ हजार ४४२ कित्ता हकप्रद पनि सूचीकरण गरिएको हो ।
← ५२ लाख ४१ हजार कित्ता सेयर वैशाख ६ भोलिबाट बिक्री हुदै
पाथिभरा माताले हामीसबैको रक्षा गरुन, आज- ०६ बैशाख २०७८ सोमवारको राशिफल पढौं →
कोभिशिल्डको दोस्रो डोजको बारेमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले यस्तो भन्यो
२८ माघ २०७७, बुधबार ०९:०१ Basanta Khanal	0